Ukuhlasela kobuphekula ku-24 Oktoberplein e-Utrecht, kwesaba lonke izwe! : UMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-18 March 2019	• 35 Amazwana
Kulolu suku kwakuzoba nokuhlasela kwamaphekula e-Utrecht. Asazi lutho okwamanje, ngaphandle kokuthi sifunda, sizwe futhi sibona izindaba zebhodi emaphephandabeni. Kube khona ukudubula ku-tram kuso I-24 Oktoberplein. Manje sekukhona ukuhlaselwa ephahleni eTurumanlaan e-Utrecht. Kubonakala sengathi kukhona umenzi we-1. Kodwa-ke, kukhona nazo izindaba mayelana nabahlukumezi be-4. Amaphoyisa ayefuna i-Renault Clio ebomvu. Amaphoyisa afuna ukusho lutho ngezisulu, kepha izisulu zingeniswe esibhedlela esiphuthumayo. Futhi ngakho indaba ikhula futhi idideke kakhulu. Konke kuzwakala kakhulu futhi kuyinkimbinkimbi, kodwa mhlawumbe inhloso.
Kuyinto indaba ejabulisayo ye-mega futhi okungenani sithola umuzwa wokuthi ukwesaba kusekhona futhi ukuthi kungaphuma nje noma nini nanoma kuphi. Asizicabangi amasu omhlaza we-green and musa ukucabanga ngokusebenza kokubukhoma, njengoba sibonisiwe njalo kusayithi, njengalokhu Imibukiso ye-Pegida-Antifa noma ku- I-Zaanse vloggersrel (isiteji ngokuphelele). Kunoma yikuphi, abezindaba babangela ukwesaba okukhulu futhi abantu bayabizwa ukuba balayishe noma yikuphi ukurekhoda kuwebhusayithi yamaphoyisa. Lokhu ngokwemvelo kunomthelela omkhulu kumfanekiso wokwethembeka. Akekho oyozibuza ukuthi izithombe ezilayishiwe zabahlanganyeli ku-PsyOp (ukusebenza kwengqondo) kungenzeka noma mhlawumbe ziye zahlanganiswa nge-software.
Ezweni eligcwele izikole zemidlalo futhi Inoffizieller Mitarbeiter ungakwazi kalula ukubeka izimo ezinjalo endaweni yesehlakalo, ikakhulukazi uma ubeka ukuhlaselwa endaweni lapho ngokuvamile kungabi khona abantu abaningi kakhulu. Lokho kuyindaba yokuyeka indawo futhi uvumele iqembu labadlali ukuba benze umsebenzi wabo. Nginokungabaza okukhulu ezimweni ezinjalo, ngoba ngokuvamile i-maxim 'Inkinga, Ukuphendula, Isixazululo'isebenza ngokugcwele. Qinisekisa ukuthi kukhona isimo esiyinkinga, senza ukuphendula ngokusebenzisa imidiya (okuyinto abantu abayidlala kakhulu emoyeni) bese uphakamisa isisombululo esethula ngaphezulu 'isimo samaphoyisa ku-jacket enobungane'.
Sizobona izithombe futhi sizozwa umuntu. Mhlawumbe lokhu kungukuqala kokushushiswa kwe-anti-Turkey kusukela kwesokudla okwedlulele engimemezele (bheka lesi sihloko). Okwamanje, kukhulunywa ngendoda yaseTurkey okuthiwa i-37 egama layo linguGökman Tanis. Sizobona isixhumanisi se-FETO engikhulume kuso esihlokweni (ngokuphathelene nokuhlaselwa eNew Zealand)? I-FETO yiqembu le-terrorism le-Fethullah Gülen, njengoba kuchazwe iTurkey.
Iningi labantu ngeke likwazi ukukholelwa noma ukuqonda ukuthi ohulumeni, ngokubambisana nazo zonke izinhlobo ze-ejensi (kufaka phakathi amaphoyisa kanye nemithombo yezindaba, imfundo yaseshashalazini kanye no-Inofizieller Mitarbeiter, njll) bazokwazi ukubeka lokho kwesaba esiteji. Kungenxa yokuthi abantu basakholelwa ku-Trumanshow yemidiya (i-Trumanlaan e-Utrecht ifaneleka kakhulu kulowo mongo). Bambalwa abaqaphele izimo ezibekiwe endaweni futhi ezivezwe lapha kusayithi. Abantu nje abakwazi futhi abafuni ukukholelwa ukuthi ohulumeni, izakhamizi kanye nabo abezindaba bayakwazi ukukhohlisa izinto ngokushintshanisa umsebenzi, isikhwama semali nangaphansi kwe-alibi yokufeza 'umgomo ophakeme'. Ibutho le-media media troll elungele ukuhlasela noma ubani ozama ukuyibuza le ndaba, udale ukucindezela kontanga oyifunayo.
Yimiphi imithombo abafazi namakhosikazi abanayo? Isibonelo, ungakha abantu abangekho khona kusuka ekuqaleni kwe-AI software.
Ungenza amavidiyo anamanga ajulile.
Ungasebenzisa amasu wesigreen
Ungabasha abadlali kanye nezinhlangano ezifana namaphoyisa, izibhedlela kanye nabezindaba oye wabangcolisa abantu abathintekayo ekusebenzeni. Ubani owenza into enjalo? Uyazi ukuthi bangaki abantu emakhelwane bethu asempumalanga benza yonke imisebenzi yomshini wengcaphephe emashumini ambalwa eminyaka edlule? Uma nje abantu bekhokhwa futhi bengakhuphuka, baningi abavumela ukuthi amabhulukwe enze ibhizinisi futhi agcine iminyango yabo ivaliwe ezweni langaphandle. Uma ungakholelwa lokho, awuzange ufunde umlando kahle. Mhlawumbe uzodlalwa nge-show show ukuze ugcine ukwesaba kuwo, ukuze isimo samaphoyisa sikwazi ukuqhubeka sizenzele.
Amazwana aphawulekayo avela kumuntu othiwa "ozibonela ngeso lengqondo." de Telegraaf igama elithi Koster lathi into ehlabayo:
UDe Koster: "Ngivela emsebenzini wami lapho kwenzeka. Ngimi emigwaqweni ye-24 Oktoberplein futhi ngibona owesifazane elele phansi, ngicabanga ukuthi uphakathi kwe-20 ne-35 ubudala. Ngaleso sikhathi ngazwa pang pang pang kathathu. Amadoda amane ahamba ngokushesha kakhulu kuye futhi azama ukumhudula futhi ngase ngizwa pang pang pang futhi labo bafana bavumela ukuba owesifazane abuye futhi. I-chaos kakhulu lapho. "
Ngakho lona wesifazane wayesekhona lapho ukudubula kwenzeka? Strange. Uyazi ukuthi yini. Yenye indaba futhi sizozwa izindaba eziningi. I-Trumanshow kumele iqhubeke:
(Ubuye ufunde isihloko esandulelemayelana nokuhlaselwa eNew Zealand ukuze kuqondwe kangcono ukwethulwa kwamanje kwamaphekula)
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: telegraaf.nl, indebuurt.nl
Ukuhlaselwa kwe-New Zealand: ukusungulwa okucacile kokucwaninga emhlabeni wonke, ukungaxhunyiwe kwesibalo sabantu kanye nokwehlisa umthetho
Amathegi: 24, 37, ukuhlasela, umenzi wobugebengu, afakiwe, U-Fethullah, FETO, wezwa, ofakazi, Gokman Tanis, elihlekayo, unyaka ondala, eyodwa, Isikwele sika-Okthoba, isibhamu, ukwesaba, ukuhlasela kwamaphekula, ubuphekula, tram, I-Trumanlaan, Isi-Turkish, Utrecht
18 March 2019 ku-14: 23
Ngiyazi ukuthi unesithakazelo ekubaleni izinombolo.
18 March 2019 ku-15: 33
UHarry S. Truman wayengumbusi waseMelika owakhonza njengomongameli we-33rd wase-United States,
18 March 2019 ku-18: 04
I-33e degree, kubonakala sengathi i-Ides ka-Mashi iye yaphuma ngamandla okuhlelekile. Ake sibone ukuthi singalindela ukuthi i-22e ifinyelele esihlokweni.
18 March 2019 ku-14: 54
18 March 2019 ku-14: 58
"Noma kunjalo, kungani isikwele sabizwa ngemuva komhla ka-24 Okthoba? Ingabe kwenzeka okuthile okhethekile ngalolo suku? Yebo! Ngomhla ka-Okthoba 24 1945, namhlanje ngeminyaka eyi-73 edlule, i-United Nations yasungulwa. Kakade phakathi nemibono yempi yasungulwa ngenhlangano yamazwe ngamazwe eyayiphishekela ukuthula, ukuphepha nokubambisana phakathi kwamazwe. Ngemva nje kweMpi Yezwe Yesibili, ngo-24 Okthoba 1945, isikhathi sifikile: iNhlangano yeziZwe yayiyiqiniso. "
Futhi impela amaphoyisa acela ukuthi akukho zithombe okufanele zifakwe kuma-social media: i-alibi yokucwaninga isivele isethwe.
18 March 2019 ku-15: 19
Kuhle abadlali babekwe esikhundleni, kodwa bayesaba kakhulu ukuthi abantu baqala ukuhamba
18 March 2019 ku-15: 22
Yini engisayizibuza ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi bonke labo abasebenza ngekhamera bangabikho kuyo yonke indlu yokuhlasela? Ingabe isithwebuli samaphoyisa sivulekile ngokugcwele ngesikhathi somkhankaso wesibindi ukuze amaphekula abuye alalele kahle? Noma ingabe labesifazane namakhosikazi bathola iphuzu? "Woza ku-huppelepup, ngoba sizokwenza enye inqola"
Konke kubonisa i-PsyOp.
18 March 2019 ku-15: 36
Ingabe usabona uxhumano nesiteleka samanje? Ucabanga ukuthi kuyinto engavamile ukuthi izindaba ziqhwaqele phansi ... noma ziye zakwazi ukusebenzisa isiteleka kulokhu?
18 March 2019 ku-16: 06
Isiteleka sase-Amsterdam sinesiqiniseko sokuthi i-trams e-Utrecht yayingagcwele kakhulu kunokujwayelekile
18 March 2019 ku-16: 13
Manje ngiyabona ukuthi kwakuyisiteleka sikazwelonke, kanjalo nase-Utrecht.
Lokho angeke kube yinto engaqondakali futhi ngokuqinisekile akuqinisekisile ukuthi abaningi abahamba ngezinyawo baye bafuna ezinye izithuthi noma bamisa usuku. Kulokhu kusakazwa kusengaphambili.
18 March 2019 ku-16: 14
Esinye isignali ukuthi kungenzeka ukuthi sibhekene ne-PsyOp ehleliwe kahle.
18 March 2019 ku-16: 36
Ngokuqinisekile, ngeke kube yinto engavamile ukuthi lesi siteleka esikhulu senzeke ngokuqondile ngosuku lolo "tereur" isenzo.
18 March 2019 ku-18: 09
Ihhovisi le-(semi) lombuso ka-NS lise-Utrecht, kulobubusuku sizobona lo msebenzi waseYunivesithi yaseUtrecht okuningi
18 March 2019 ku-18: 55
18 March 2019 ku-16: 15
Izindaba zobufakazi azilungile, abantu abaningana bathi basuke bezwa izibhamu, kuhlanganise nabashayeli.
Futhi lo mdlali we-RTL. I-shots ibonakale ilukhuni, kusho u-Utrechter. "Ngicabanga ukuthi kwakukhona umfanyana onayo. Esikhundleni samabhongo amakhulu, ngezwa ukukhukhuma emfubeni. "Ngokusho kukaDaan, kubonakala sengathi kuhlaselwa ngokuqondile kwalo wesifazane.
Kuhle ukuthi abashayeli abaningana esigcawini somgwaqo abanomsindo omkhulu emotweni yabo bezwa umuntu edubula ngesithuli ...
18 March 2019 ku-16: 45
"Umasipala wase-Utrecht ngaphambilini wancoma abantu ukuba bahlale endlini. UVan Zanen: "Senze lokho ngoba sasizicabange ukuthi kwenzeke isigameko sokudubula ezindaweni eziningana. Akusilo iqiniso, njengoba sikwazi manje. Umsolwa oyedwa usekusesithombeni, baseshwa, akafiki ngaphakathi. Kukhona futhi abanye abasolwa, kuze kube manje asikwazi lokho. "
Ngicabanga ukuthi lezo trams zigcwele amakhamera ngakho-ke lokhu kushayisana okungaqondakali kungenye enye inkomba ye-PsyOp.
18 March 2019 ku-17: 00
UMartin uyazi kabanzi ngalokhu?
Ukuvuselela i-16.24: Ngokusho kofakazi, umshayeli wabiza u-'Alahu Akbar 'ngaphambi kokuvula umlilo ku-tram. Umgibeli owabiza ngokuthi uMoroccan wasala yedwa, ngokusho kukaHet Parool. Sifuna ukwazi ukuthi ngubani ohlelweni olumisiwe owokuqala ukugcizelela ukuthi aluhlangene no-Islam.
18 March 2019 ku-17: 18
Bona isixhumanisi sakho ngemuva nje kokukhululwa. Indaba engacacile ngempela. OFakazi bakhuluma ngabahlukumezi be-4 abanezikhali ezindala nezibhamu ... .. Kodwa banengqondo yomsolwa we-1
18 March 2019 ku-17: 20
Ngicela ungisize angiqondi. Yini ebonisa ukuthi lokho okwakwenzekile kuhlobene 'nobuphekula'? Kungani kungenjalo ngobugebengu obuhleliwe noma izinkinga ezishisayo?
Sonke sihlanya ngamakhosi enkulumo?
18 March 2019 ku-18: 54
Ngiyaqonda ukuthi umenzi wobugebengu ubanjwe ukubulala ubukhosi. "Abazingeli bamaphekula" baqala ukubamba ingonyama futhi bathola igundane. Kwesaba izithombe e-Holland. Bhala i-fimscript bese uyithengisa ku-Hollywood. Yeka izwe.
Kwesaba izithombe e-Hollandia.
18 March 2019 ku-18: 15
Nginamahloni onke ngigula ngakho konke, kungcono kakhulu.
Uma ufuna ukugoqa into enjalo, yenza kahle ngakho ungenzi ibhayisikobho enjalo ehlekisa kabi.
Lokho i-rutte ayikwazi ukuyivimba. Yeka kabi
Njengomdlali onjalo eNewzealand ... yikuphi ukumboza kwesibhamu emgqeni, iphi igazi odongeni ....
18 March 2019 ku-20: 57
Abafileyo base bevele phansi ngaphambi kokuba umnumzane efike ku la Wolfenstein 3D.. futhi manje zonke izithombe zisusiwe kahle kwi-intanethi
18 March 2019 ku-18: 22
Izimvu zisesaba kakhulu ngaphambi kokhetho kanti empeleni zidinga umalusi omuhle.
"Wonke amaqembu ezombangazwe, ngaphandle kweForamu Yentando yeningi, amisa umkhankaso wokhetho lapho kuqhutshwa okhethweni loMkhandlu wesiFundazwe mayelana nokuhlaselwa."
18 March 2019 ku-18: 40
Ngokungazelelwe ngithola ukuzwa kwe-deja vu. Khumbula umbuzo wale ndoda yaseTurkey eyangena ngasese eNetherlands. Izimpikiswano, njll. U-Rutte wabe esewunqoba ukhetho. Wenze "ngokuzimisela" ngokumelene namaTurkey. U-Rutte no-Erdogan ngaleso sikhathi?
18 March 2019 ku-18: 43
Ngokuqondile 😀 le Psyop inemibono eminingi futhi ingenye yazo ..
18 March 2019 ku-18: 39
Ngakho-ke, ummeli we-PsyOp ubanjwa. Kuhle ukuthi sinamaphoyisa amakhulu kangaka. Benzani kahle, "ozakwabo"; "Abafana bethu". Izinyathelo zokwesaba ziveza izithelo!
18 March 2019 ku-18: 50
.. Isinyathelo esilandelayo yizinyathelo ze-biometric, yiqiniso asikwazi ukuvumela lokhu kuhambe. U-Rutte uphakanyiswa kwi-Politburo eBrussels ukuze agcine inkampani engumzalwane wakhe waseTimmermans. Izindlela zikahulumeni zamaphoyisa zenziwa ngokusebenzisa i-EU ngokubambisana noFrontex, i-EUROGendfor ifakwe futhi i-voila i Imisebenzi yePolisi ye-2.0 isebenza njengenhlangano, ngoba izokwenzeka futhi ukuze singalokothi sikhohlwe ...
18 March 2019 ku-18: 52
18 March 2019 ku-19: 54
Siyakwamukela ehlathini, isixuku siza ukuvakasha. I-US ifaka amabhomu e-nyukliya eYurophu kuleli sonto, ukuxhasana neTurkey kungase kwandiswe futhi kuleli hlobo, abaseMelika bashiye isivumelwano se-INF futhi basathuthukisa imicibisholo engavunyelwe ukuhamba, ukungezwani okwanele ukudala ibutho lase-EU, la maqhawe amasha angashintsha ngokushesha ukubhekana namajeketi.
Ngendlela, ubonile lokho okulotshwe ngezibhamu ze-New Zealand attack? Isifundo somlando wamakhulu eminyaka eYurophu naseMbusweni wase-Ottoman
18 March 2019 ku-21: 02
I-Breivik Tarrant Copy Copy eqeqeshwe ngabasolwa abajwayelekile abasebenzisa i-Breivik njenge-idiot ewusizo. Yonke imigwaqo iholela kubantu abasolwa ngokujwayelekile ngaphandle kwase-Utrecht kunokuba kuphilwe i-mousetrap.
18 March 2019 ku-20: 31
I-France 2019, i-New World Order ajenda
Ukucwaninga kuyinto / kuyisihluthulelo samandla abo ngakho-ke konke kungasenza sikholelwe, asinakube nokunye ukukhohliswa okuyikhohlisayo phakathi noCharlie Hebdoo, yebo, izizwe eziye zabona wonke ama-Charlie Hebdoo ukudubula, lapha kule ndawo kukhulunywe okuningi.
Isithombe sakho sisuka kuJohn Maes, Telegraaf. Ikhasi le-Wikipedia laleli hlaselo selidalwe manje, kungakapheli usuku, ngesithombe esifanayo. I-Wiki ayithumeli izithombe zabo i-copyright yabo engekho mahhala. Ngamafuphi, siphinde sibone i-huddle yezinsizakalo eziyimfihlo kanye nemidiya encyclopedia ye-propaganda yokulala eNetherlands. Ngakho i-100% impela ifulegi lokukhohlisa.
uJohan the hague wabhala:
19 March 2019 ku-11: 31
Kuyamangalisa ukuthi umuntu obhekene nokuboshwa futhi oyisigebengu sezinhlanga ezihlanzekile angalindela isigwebo ekhaya.
Ngabe ngithola imicabango ka-Folkert de G.
Ngithola okubi kakhulu, isihlobo esilandelayo kufanele siphile nalokhu.
Ngifisa ukwazi ukuthi yikuphi umthetho omusha ozophuma kulokhu.
Umthetho omusha wokunciphisa isakhamuzi kodwa hhayi ukukhawulela ubugebengu, ngoba kufanele sikwazi ukuyisebenzisa.
Kufanele sikwazi ukusho ukuthi umthetho ulungile.
Izombangazwe kubi kepha ubulungiswa bubi kakhulu !!
« Ukuhlaselwa kwe-New Zealand: ukusungulwa okucacile kokucwaninga emhlabeni wonke, ukungaxhunyiwe kwesibalo sabantu kanye nokwehlisa umthetho
Owesolwa osolwa ngokubulala uGökmen Tanis waboshwa, mhlawumbe umdanso womndeni »
Ukuvakashelwa okuphelele: 11.612.940
i-bartelo op Uthingo lumele inkolo enamdlandla ngenkathi abasekeli becabanga ukuthi balwela 'ukuhlukahluka nokuzibandakanya'
danny op Iyingozi kangakanani i-5G nokuthi ifakwe ngasese kanjani
Joyina abanye ababhalisile abangu-1.614